प्रदेशको कोभिड रोकथाम बजेटमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई उपेक्षा
जुम्ला । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले १ अर्बको बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । जसमा विकास बजेट रकमान्तर गरेर ५० करोड बजेट कोभिड कोषमा समेत जम्मा गरिएको छ ।
तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भने कर्णाली प्रदेश सरकारको कोभिड रोकथामको बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ । सुर्खेत अस्पताललाई २२ करोड अन्य जिल्ला अस्पताललाई १२ करोड बजेट दिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई कोभिड रोकथाममा बजेट नै छुट्टाइएको छैन ।
कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा देशकै अग्रणी भूमिका खेलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट छुटाउन प्रदेश सरकारले कन्जुसाई गरेको कर्णाली प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक ड. राजीव शाहले बताउनुभयो ।
पहिलो चरणको कोरोना सङ्क्रमणका बेला पिसिआर परीक्षणमा देशकै दोस्रो स्थानमा परेको, कर्णालीका १० वटै जिल्लामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानलाई कोभिड रोकथामको बजेटमा उपेक्षा गरेको प्रति शाहले दुखेसो गर्नुभयो ।
जुम्लामा अहिले करिब २ सय १५ वटा अक्सिजन सिलिन्डर स्टक राखिएको छ । जसमा कोभिडका लागि भनेर १ सय ५० छुटाइएको छ । बिरामीको चाप बढेको खण्डमा बढीमा १० दिन सम्म मात्रै हालको स्टक अक्सिजनले काम गर्ने देखिन्छ । बिरामीको चाप बढेमा जुम्लामा पनि अक्सिजनको अभाव देखिने भएकोले अक्सिजन प्लान्टका लागि करिब २ करोड बजेट अत्यावश्यक रहेको समेत डा. शाले उल्लेख गर्नुभयो । तर प्रदेश सरकार आवश्यकतालाई मध्यनजर नगरी कर्णाली प्रतिष्ठानलाई बजेटमा उपेक्षा गरेकोले कोभिड रोकथाममा थप चुनौती निम्तिएको समेत बताउनुभयो ।